Home Wararka Qarax lala eegtay ciidamada Daraawiishta jubbaland oo khasaare dhimasho & dhaawac...
Qarax lala eegtay ciidamada Daraawiishta jubbaland oo khasaare dhimasho & dhaawac uu ka dhashay
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Qarax miino nooca dhulka lagu aaso oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay degmada Afmadow ee Gobolka Jubbada Hoose, kaasi oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Qaraxa ayaa waxaa lala eegtay Ciidamo ka tirsan kuwa Daraawiishta dowlad Goboleedka Jubbaland oo sacdaal ku marayay wadada u dhexeeysa degmada Afmadow iyo deegaanka Qooqani.
Inta la xaqiijiyay qaraxa oo miino ahaa ayaa waxaa ku dhintay saddex Askari iyo Sarkaal magacaabiisa lagu soo gaabiyay Cabdullaahi Carab, waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan inay jiraan Askar dhaawacyo soo gaareen.
Weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Saraakiisha Ciidamada Maamulka Jubbaland oo ay uga hadlayaan qaraxaas khasaaraha geystay ee ka dhacay Gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan degmada Afmadow oo loo maleynayo inay ka dambeeyeen Al-shabaab.
Al-shabaab ayaa inta badan qaraxyada noocaan oo kale ah la eegta Ciidamada dowladda iyo kuwa maamul Goboleedyada, xiliyada ay ku socdaalayaan waddooyinka, waxaana dhowr jeer oo horey sidaan oo kale qarax loola eegtay Ciidamo ka tirsan Jubbaland.
Previous articleGeeleh iyo Al Sisi oo kulan gaar ah ku yeeshay Magaalada Jabuuti
Next articleQaar kamida Daacish oo lagu dilay buuraha Gobolka Bari ee Puntland
Fahad Yasin oo lagu soo eedeeyay musuqmaasuq iyo Hanti Dhowrka oo...